Imiboniso Yeencwadi Neenqwelo ZamaNgqina KaYehova
ETanzania: Abantu abadlulayo banomdla kwitafile yeencwadi eDar es Salaam
EKUBENI ukushumayela kwindlu ngendlu iyeyona ndlela amaNgqina kaYehova ayisasaza ngayo inyaniso yeBhayibhile, ukusetyenziswa kweetafile neenqwelo ezineencwadi nezitsala amehlo abantu kuye kwaphumelela kakhulu ekushumayeleni iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo. (Mat. 24:14) Ukuze bafikelele kubantu abakwiindawo zikawonke-wonke, abavakalisi boBukumkani baye basebenzisa iitafile neenqwelo. Ukongezelela, amabandla asehlabathini lonke aye afumana iinqwelo zeencwadi ezimalunga ne-250 000. Iye yaba yintoni imiphumo?
EDar es Salaam, eTanzania, abantu abaphantse babeyi-700 baye bacela ukuqhutyelwa izifundo zeBhayibhile ukususela oko kwaqalisa iphulo lokushumayela kwizixeko ezikhulu apho ngo-2014. Abaninzi abanomdla bayaya kwiintlanganiso ibe bayasondela kuThixo. Kunyaka nje omnye, abantu abasuka kumazwe aseAfrika naphesheya kolwandle baye bazithathela iincwadi ezingaphezu kwe-250 000 kwiinqwelo zethu.
KwiiSolomon Islands, apho iqaqobana labavakalisi abangaphantsi kwe-2 000 lishumayela kwintsimi enkulu enabemi abakwiziqithi ezingaphezu kwe-300, iphulo lokushumayela kwizixeko ezikhulu liye laba yindlela ebalaseleyo yokusasaza imbewu yenyaniso. Kwisixeko esilikomkhulu, iHoniara, abazalwana baye bahambisa iimagazini ezingaphezu kwe-104 000 neencwadana ezingaphezu kwe-23 600, ezininzi bezihambisa kubantu abasuka kwiziqithi nakwiilali ezisemaphandleni apho kungekho maNgqina. Emva kwemini nje enye, bahambisa iincwadi ezithi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? eziyi-400 yaye abantu abayi-60 bacela ukuqhutyelwa izifundo zeBhayibhile.
Ngenye intsasa, oovulindlela abathe ngxi, uMichael noLinda babemisa itafile kufutshane nonxweme lweSiqithi iMargarita, eVenezuela. Kwafika indoda enguAníbal baza bayinika incwadi ethi Okufundiswa YiBhayibhile. Yabaxelela ukuba uyise waswelekela kwelo nxweme kwiminyaka esixhenxe edlulileyo yaye ukususela ngoko, unina udandathekile. Kwiveki elandelayo, uAníbal waphinda waya kuMichael noLinda, wabaxelela ukuba olu lusuku awasweleka ngalo uyise. Wakhupha iselfowuni wafowunela unina, waza wacela uMichael ukuba athethe naye, amthuthuzele. UMichael wayenza loo nto. Ukususela ngoko, unina ebesoloko efowunela uMichael noLinda, bemthuthuzela ngezibhalo. Ngenye imini umama ka-Aníbal wababhalela ngefowuni esithi, “Namhlanje ndiziva bhetele kakhulu kuba niye nandithuthuzela naza nandinceda ukuba ndibe nokholo olungakumbi.”
EMerika kuye kwalungiselelwa iphulo lokushumayela kwiindawo eziyi-127 ezikwizixeko ezikhulu eziyi-14. Kwiinyanga zokuqala ezisixhenxe zonyaka wenkonzo ka-2015, kwaqaliswa izifundo zeBhayibhile eziyi-8 445! Olu hlobo lokushumayela liye lafak’ isandla nasekuncedeni abantu abaninzi ababekunqulo lokwenyaniso ukuba baqale apho babeyeke khona. Ngokomzekelo, eLos Angeles, eKhalifoniya, indoda enguTerry yayijonge itafile yeencwadi zethu, umzalwana nodade abatshatileyo ababekuloo tafile bayibuza ukuba yayikhe yazifunda na iincwadi zethu. Yathi nayo liNgqina likaYehova kodwa seyineminyaka emine ipholile. Bayifundela baza baxubusha nayo uHezekile 34:11, apho uYehova athi: ‘Mna ngokwam, ndiya kuzifuna izimvu zam ndize ndizinyamekele.’ Bayixelela ngewebhsayithi yethu neJelo Losasazo LamaNgqina. Ngentsasa elandelayo uTerry wabhalela lo mzalwana emxelela ukuba ngaphambi kokuba abone itafile yabo, wayesandul’ ukucela uxolo kuThixo ngokuba engasayi kwiintlanganiso zebandla. Wacela nokuba amncede asondele kuye. UTerry wathi: “Emva koko, wena wandibulisa ngobubele. Wandifundela isibhalo esandikhuthazayo, wandinika nenkcazelo eza kundinceda ndibuyele kwintlangano kaYehova. Watsho waphendulwa umthandazo wam.”
Zine iindawo ekwenziwa kuzo iphulo lokushumayela kwizixeko ezikhulu eAddis Ababa, e-Ethiopia. Kwiinyanga nje ezintathu, abazalwana babesele behambise iincwadi eziyi-37 275, yaye abantu abayi-629 bacela ukutyelelwa ngamaNgqina. Enye indoda eseyikhulile eyafumana incwadi ethi Okufundiswa YiBhayibhile yaqalisa ngoko nangoko ukuyifunda. Yayifunde kwisikolo sabefundisi ibe yayinemibuzo ngoYesu noBukumkani bukaThixo. Ngosuku olulandelayo yabuyela kule tafile iye kufuna iimpendulo zaloo mibuzo. Kusuku emva koko yavuma ukufundelwa iBhayibhile, ukuphela kwaloo veki yaqalisa ukuya kwiintlanganiso. Ngoku iya qho ezintlanganisweni futhi yenza inkqubela.
E-Ethiopia: Kuboniswa ngeencwadi zesiAmharic eAddis Ababa
EMexico enye indoda engumYuda yaya kwitafile yeencwadi yaza yabuza abazalwana ababini ababelapho ukuba banayo na incwadi ethetha ngokufa. Bayixelela ukuba seziphelile iimagazini ezithetha ngokufa, kodwa bayinika ethetha ngekamva. Le ndoda yabamba ingalo yomzalwana yaza yathi: “Andinamdla kwikamva. Ndifuna ukuzibulala.” Zathi waxa iinyembezi emva koko. Abazalwana bayibuza ukuba kutheni ifuna ukuzibulala. Ifixiza yathi: “Ndisand’ uswelekelwa ngunyana wam.” Bayibonisa isahluko 7 sencwadi ethi Okufundiswa YiBhayibhile. Bayifundela iziqendu ezibini zokuqala phantsi komxholwana othi “Xa Umntu Esimthandayo Esifa” kunye nesokugqibela, apho kucaciswa ngethemba ngabafi. Ichukumisekile, yaphinda yabamba ingalo yomzalwana, yabuza, “Iza kwenzeka nyhani le nto?” Abazalwana bayiqinisekisa ukuba uYehova uza kuyenza into ayithembisileyo. Yababuza: “Yintoni endimele ndiyenze ukuze ndiphinde ndimbone unyana wam?” Benza amalungiselelo okuya kwikhaya layo. Bafika sele ibalindele, ifuna ukuqalisa isifundo seBhayibhile.
Omnye umveleli ohambahambayo owanceda ekuqaliseni iphulo lokushumayela kwizixeko ezikhulu eNew York wathi: “UYehova uye walisikelela kakhulu eli phulo. Khange lincede ekufikeleleni izigidi zabantu nje kuphela, kodwa lisenze sakwazi ukudibana nabantu abaninzi abapholileyo okanye abakhutshelwa ngaphandle—‘izimvu ezilahlekileyo’—ngoku ezincedwayo zibuyele emhlambini.”—Hezekile 34:15, 16.